သင့်အကြိုက်ဆုံး PlayStation4အားကစားပြိုင်ပွဲ Play | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » အဝေးမှသင့်အကြိုက်ဆုံး PlayStation4အားကစားပြိုင်ပွဲ Play
သင့်အကြိုက်ဆုံး PlayStation4အားကစားပြိုင်ပွဲအဝေးမှ APK ကို Play
ဂိမ်းများကိုအမြဲကစားရန်ပျော်စရာဖြစ်ကြသည်။ အကောင်းဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးသော-နည်းပညာဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုပေးဖို့ကွိုးစားသောဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်အများအပြား gadgets နှင့်နည်းပညာများကိုလည်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ PlayStation4သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်များ၏သက်သာအတွင်းအမြင့်ဆုံးနှင့်အအရှိဆုံးကွောကျရှံ့-ထိုက်တန်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုရဖို့သုံးနိုငျတထိုကဲ့သို့သောကိရိယာဖြစ်သည်။
ဤ devices များစျေးပေါလာကြဘူးရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဂိမ်းကစားဘို့ပိုက်ဆံအများကြီးငွေပမာဏကိုပေးဆောင်လျှင်အပြင်, ထို့နောက်သင်သည်သိသာသငျသညျအဓိက device ကိုရယူနိုင်တော့မည်မပြုစေခြင်းငှါလာသောအခါအခြားအလိုက်ဖက်ကိရိယာများပေါ်တွင်အလားတူဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ကြုံခံစားချင်လိမ့်မယ်။
သို့သော်ဤ PlayStation နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအရာတစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။ PlayStation လေးဖြန့်ချိခဲ့သည်နှင့်အသငျသညျအကြှနျုပျတို့့လုပ်နေတာ၏မြောက်မြားစွာနည်းလမ်းတွေတွေ့ကြပြီဆိုတဲ့အချက်ကို၏စိတ်ချပါနိုင်ပါတယ်ကတည်းကသို့ရာတွင်ထိုသို့ခြောက်နှစ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သင်အဝေးကနေမဆို Android device ကိုပေါ်ရှိသင့်အကြိုက်ဆုံး PlayStation4ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားရန်ဆန္ဒရှိလျှင်နောက်တော်သို့လိုက်ရန်လိုအပ်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောခြေလှမ်းများမှာကြည့်ပါ။ လိုအပ်သောခြေလှမ်းများ၏စာရင်းတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ PlayStation4Remote Play ကို Module Installing
သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံး PlayStation ဂိမ်းအဘို့သင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားကစားအတွေ့အကြုံကိုတက် setting မတိုင်မီသိရန်လိုအပ်သည့်ပထမဦးဆုံးအရာကဒီတစ်သုံးပိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကွောငျ့ကသင်တို့ပတ်လည်ကပ်နှင့်အချိန်တစ်ခုအထူးသဖြင့်ဘောင်အတွင်းသမျှသောဤခြေလှမ်းများဖြည့်စွက်ရန်အဘို့အအရေးကြီးပါသည်။
ဒါကြောင့်သင်ကတစ်ခုခုလုပ်နေသို့မဟုတ်သင့်အာရုံကိုကိုင်မည်သည့်တက်လာမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုပြီးတော့အခုကဤခြေလှမ်းများနှင့်အတူမစတင်မှအကောင်းဆုံးကြောင့်လည်းမရှိကြောင်းသိကြအလုပ်များလျှင်။ သငျသညျမနှမြောဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ရှိကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သို့သော်ထို့နောက် Magisk module တစ်ခုရတဲ့နေဖြင့်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်ပါ။ ဒီမော်ဂျူးသူတို့တစ်တွေ Sony က device ကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်အသုံးပြုသူများ PlayStation application ကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
သင် Magisk module ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ပြီးတော့လာမယ့်ခြေလှမ်းအဝေးထိန်း Play စ App ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်လုပ်ပေးပြီးတာနဲ့သူကသင့်လျှောက်လွှာအပေါ်အမြစ်၏ status detect နိုင်ပါတယ်ကတည်းကထို့နောက်လျင်မြန်စွာဖွင့်လှစ် Magisk အဝေးထိန်း Play စ App ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ Hide ။ ထို့နောက် Magisk Manager ကို App ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်၏လက်ဝဲဘက်မှာပစ္စုပ္ပန်အတွက် Menu ကို option ကို click လုပ်ပါ။
အဆိုပါ Downloads အပိုင်းကိုသွားပါရှာဖွေရေး icon ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါနှင့် '' PlayStation4'သို့မဟုတ်' 'PS4' 'ကိုရှာပါ။ အဆိုပါရလဒ်ထို့နောက်လျင်မြန်စွာသင်ဤလမ်းညွှန်များအတွက်လိုအပ်သည့် module တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောဤရှာဖွေမှုအတွက်တစ်ခုတည်း entry ကိုပြသလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုဒ်မြှားပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်တပ်ဆင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစတင် '' Install '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ တပ်ဆင်ပြုပြီးတာနဲ့ device ကိုပြန်လည်စတင်ရန်နှင့်လိုအပ်သော module ကိုသက်ဝင်စေဖို့ reboot button ကို click လုပ်ပါ။
အဆိုပါ PlayStation4Remote Play ကိုလျှောက်လွှာရယူခြင်း
အဆိုပါ reboot ပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်သင် Sony ကဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သင့် PS4 Remote Play ကိုလျှောက်လွှာ အရာဆိုနီကပံ့ပိုးထားတဲ့ devices များအားဖြင့်ဝင်ရောက်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာသင်အစောပိုင်းကယခုသင့်မျက်နှာသာအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအင်္ဂါရပ်များမရှိခြင်းတို့ကနှောင့်နှေးခဲ့ကြသကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုအရေအတွက်ကတက်ဖွင့်လှစ်မယ့်ကြီးမားတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရုံ installed သော module ကိုသငျသညျကို Sony အားဖြင့်ထောက်ခံကိရိယာ၏အမျိုးအစားအောက်တွင်ကျရောက်မယ့် device ကိုမရှိကြဘူးကတည်းကအစောပိုင်းကသင်သည်သင်တို့ထံကဝှက်ထားပါပြီမယ်လို့ထားတဲ့ဆိုနီ PlayStation4Remote Play ကိုလျှောက်လွှာရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်း Sony က PS4 Remote Play ကိုလျှောက်လွှာဒေါင်းလုပ်စတင်ရိုးရှင်းသောလင့်များကို click နိုင်ပါတယ်။ ယခုတွင်သင်သည်ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူလျှောက်လွှာကို install နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
မှားယွင်းမှုတစ်ခုပေါ်လာတော်မူသောအဘို့အအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအမှားများသောအားဖြင့် '' မကိုက်ညီသည့်ကိရိယာများကို 'သို့မဟုတ်' 'PS4 Remote Play ကို Install မလုပ်နိုင်ပါ' 'ကဖော်ပြသည်။ ဤအမှုကိစ္စနှစ်ခုလုံးဖြေရှင်းရန်, သင်ရုံသင့်ရဲ့ App Store မှယခင်ကရှိပြီးသားဒေတာများကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုလုပ်ဖို့, သင့်ကိရိယာပေါ်တွင် Settings option ကိုဖွင့်လှစ်။
သင်သည်သင်၏ device ကိုပေါ်, installed သော applications များ, စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်မှတဆင့် option ကိုဖွင့်ပါ။ ကို 'Play Store ကို' '၏ထို option သို့မဟုတ်စာရင်းမှ Scroll သည်။ ကြောင်းစာရင်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့် 'Settings' option ကို click လုပ်ပါ။ '' ကိုရှင်းလင်းရန်သိုလှောင် '' ၏ထို option ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ တစ်ဦးကမက်ဆေ့ခ်ျကိုသင်လျှောက်လွှာကို reset မည်ဖြစ်ကြောင်းသိစေဖို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ရိုးရှင်းစွာအဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် 'အိုကေ' 'ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါ Connection ကို Up ကိုချိန်ညှိခြင်း
ဆိုနီမှအသစ် PS4 Remote Play ကိုလျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီ, သင်ဝေးလံခေါင်ဖျားကစားသင့်ရဲ့ PlayStation4ကိရိယာမှ enabled ကြောင်းသေချာအောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအသင့်ရဲ့ PlayStation4ပေါ်တွင် 'Settings' option ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အဝေးထိန်း Play စကော်နက်ရှင်က Settings ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါကြောင့်ပြီးသားမဟုတ်ခဲ့လျှင် enable ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားကစား application ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့စတင်ရန်။ သင်မြင်လိမ့်မယ်အရာပထမဦးဆုံးအရာတစုံတခုသင်သည်သင်၏ controller ကိုသို့မဟုတ်မချိတ်ဆက်ဖို့လိုသလားဆိုတာကို၏မေတ္တာရပ်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံက skip ရန်အဘို့အကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ကထောက်ခံ device ကိုအသုံးမပြုအဖြစ် PlayStation4controller ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း, အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမဟုတ်ဘူး။
သင့်ရဲ့ PlayStation4နှင့်အတူသင့်ရဲ့ Android device ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အဓိကစာမျက်နှာမှာ '' Start ကို 'ခလုတ်ကိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဖော်ပြထားခြင်းနှင့်သင့်ပုံမှန်အတိုင်း PlayStation4ရဲ့ login အထောက်အထားများ၏အကူအညီဖြင့်ဝင်ပါ။ သင့်ရဲ့ PS4 အပေါ် အကယ်. ထို့နောက် devices တွေကိုရှာမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအတွင်းမည်သည့်လုပ်ရတဲ့မပါဘဲအလိုအလျှောက်ချိတ်ဆက်သငျ့သညျ။
အဆိုပါလိုအပ်ပါသည်ဦးစားပေးမှုဖို့ Settings များချိန်ညှိ
သင်အကြိုက်ဆုံး PlayStation4ဂိမ်းများကိုခံစားရန်မစတင်မီသင်မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အခြမ်းအပေါ် Settings option ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အနည်းငယ် setting များကိုထုတ်စစ်ဆေးရပါမည်။ အကောင်းဆုံးနဲ့အများဆုံးသဟဇာတ PlayStation4ဝေးလံခေါင်ဖျားကစားအတွေ့အကြုံအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးရာတစ်လမ်းအတွက် setting များကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ကြှနျုပျတို့ကိုယျတိုငျသငျသညျ, 'Frame ကနှုန်း' 'နှင့်' 'ဆုံးဖြတ်ချက်' 'အဝေးမှ Play အတွက်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေး' '၏ setting ကိုထုတ်စစ်ဆေးသင့်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သင်၏ကွန်ယက်စွမ်းရည်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းလိုအပ်ချက်များကို compliments တဲ့ထုံးစံ၌အဲဒီ options သတ်မှတ်မည်။
အကောင်းဆုံး PlayStation4ဂိမ်းအတွေ့အကြုံခံစားကြည့်ပါ
ယခုသင်သည်အပေါငျးတို့သခက်ခဲအလုပ်ပြုသောအမှုနှင့်သင်၏ကျေနပ်မှုမှအရာအားလုံးကိုတက်ထားပြီအကြောင်း, ကျန်ရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာကိုသင်နောက်ဆုံးတော့သင်အမြဲလိုချင်သော PlayStation4ဝေးလံခေါင်ဖျားကစားအတွေ့အကြုံ, ခံစားသည်။ သငျသညျအဝေးမှနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တစ်ဦးကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုနှင့်အွန်လိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်းအချို့ပျော်မွေ့ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသည်အဖြစ်ကိုဤကိရိယာပေါ်မှာကစားနိုငျပါသညျ!
ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသနည်း တစ်သက်တာ၏ဝေးလံခေါင်သီဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံအရယခုဤသူခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ! ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုသည်ဤခြေလှမ်းများသင်တို့အဘို့နှင့်သင်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူသူတို့ကိုအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ခဲ့ကြတယ်သို့မဟုတ်မပါလျှင်ခဲ့ကြသည်ကိုဘယ်လိုထိရောက်မှုကိုသိပါစေ!
NEW PS4 REM0TE ...
PPSSPP ရွှေ APK ကို - ...
PlayStation4Android ကိုအဝေးမှ PlayStation4အားကစားပြိုင်ပွဲ App ကို PlayStation4အဝေးမှလျှောက်လွှာ